Ogaden News Agency (ONA) – Suxufiyiinti Ree Sweden oo diiday inay Appeal Dalbadaan iyo Banaanbaxweyn oo ka dhacay Guriga Baarlamaanka Sweden
Suxufiyiinti Ree Sweden oo diiday inay Appeal Dalbadaan iyo Banaanbaxweyn oo ka dhacay Guriga Baarlamaanka Sweden
Waxaa maalinimadi Salasada ee 10/01/12 mudaharaad balaadhan ku qabtay wadanka Sweden jaaliyada S/Ogadenia oo hormuud u yihiin ururka OYSU. Mudaharaadka ayaa ahaa mid daba socday kuwii horay looqaban jiray ee lagaga soo horjeeday gaboodfalada ay xukuumada Ethiopia ku hayso shacabka dulman ee S/Ogadenia & walibana xadgudubyada loogaysto Suxufiyiinta.
Banaanbaxan ayaa kusoo beegmay Xilli wariyaashi Ree Sweden ee sida sharci darada ah loo xukumay ay warbaahinta caalamka soo gaadhsiyeen inaysan dalban doonin racfaan. CNN oo wareysi la yeeshay Schibbye Hooyadiis ayaa sheegtay inaysan dalban doonin appeal iyada oo warkaas kasoo qaaday wiilkeda iyo wariyaha kale ee la xidhan. Waxayna ka deyrisay goobta lagu hayo wariyaashaas oo ay tiri waxa ay ku jiraan Goobo dadka ku xidhan loo qeybiyo xero lagu xidho 1000 kunkii maxbuusba meel. Maxbusiintaas ayaa hadana loosii kala qeybiya 250 maxbuusba meel gooni ah lasii galiya. Waxaana lasiiya gogol ku filan 100 qof kaliya. Sidaas awgeed waxay sheegtay in dadka goobtaas ku xidhan aysan heli karin furaashyo waxaana dhacda in sibidhka bogga lasaarto oo waliba si cidhiidhi ah loo wada seexdo.
Hadaba Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka Sweden ayaa banaanbaxan ku muujinaya taagerada ay u hayaan Wariyaasha Ree Sweden waxuuna hor dhac usii ahaa mid si weyn loosoo agaasimay oo lagu wado inuu qabsoomo 14-ka bishan aynu ku jirno, Kaasoo aykasoo qayb gali doonaan wadama badan oo Europe ah.
Jawiga hawada oo aad u qaboobaa ayay shacabka reer Sweden ka yaabeen adkaysiga & kartida ay muujiyeen Shacabka S/Ogadenia oo ah kuwo horay wacad ugu maray inaysan marna kadaalaynin raadinta xuquuqdooda & xoriyadooda. Shacabka Sweden ayaa aad ugu qanacsanaa una riyaaqayay dibad baxayaasha kuna dhiira galinayay inay maalin uun heli waxa ay raadinayaan balse aysan ka daalin dadaalka ay ugu jiraan raadinta Xoriyadooda. Dibad baxa oo lagu qabtay Baarlamaanka hortiisa ee casimada Stockholm ayuu Gudoomiyaha jaaliyada S/Ogadenia Mudane Abdinasir Gadhweyne nasiib u yeeshay inuu gudaha u galo xafiiska wasaarada Arimaha Dibada oo uu gudoonsiiyay warqado ku qoran luuqada wadanka ee Swedhishka ah loogana hadlayo gabood falada ay ku hayso xukuumada wayaanaha shacabka S/Ogadenia & inaysan S/Ogadenia raali ka ahayn xadgudubka & falalka bini aadanima xumada ah ee lagula kacay Suxufiyiintii Swedhishka ahaa.
Xukunkan qalaad ee lagu oogay Wariyaasha ree Sweden waxa weeye guul daro ku habsatay saxaafada dunida waxa sidaas yiri madaxweynaha midowga suxufiyiinta Sweden mudane Jonas Nordling waxuuna kusoo saaray hadalkaa bayaan lagu baahiyay bogga midowga suxufiyiine Ree Sweden.
Sikastaba ha ahaatee dibadbaxii maanta ayaa kusoo gabagaboobay jawi wanaagsan.
xasan guhad says:
Aad ayaan ugu faraxsanahay mudaharadkan sababtoo ah waxa loogu mujin haya sweden sgda an uga xunaha wariyayasha lagu xgdhxidhay iyaga oo gudanhaya hawshodi shaqo